Ogaden News Agency (ONA) – Kacdoonkii Qoomiyadaha oo Maqale Gaadhay & TPLF oo Fajacsan.
Kacdoonkii Qoomiyadaha oo Maqale Gaadhay & TPLF oo Fajacsan.
Wararka naga soo gaadhaya magaalada Maqale ee xarunta Gobolka Tigrey ayaa sheegaya arin filan waa ah oo qabsatay kooxda wakhtigeedu gabaabsiga yahay ee TPLF.
Sida warku naga soo gaadhayo kooxda TPLF iyo maamul kusheegaya Gobolka Tigreega ayaa soo qaban qaabiyay ciyaar kubada cagta ah oo ay ugu tala galeen in ay dhex marto labo kooxood oo aad looga taageero Gobolka Tigreega.
Warka ayaa intaas kudaraya in koobta ay ciyaartu kadhici lahayd ay mar qudh ah isu badashay goob qalalaaso kadib markay taageerayaashii kooxuhu bilaabeen mudaharaad kadhan ah kooxda TPLF iyo maamulka Gobolka Tigrey, waxayna shacabku halmar kudhaqaaqeen taloobo aysan qaban qaabiye yaashu filaynin.
Dadwaynaha garoonka kubada cagta soo buuxdhaafiyay oo aad ubadnaa ayaa kudhawaaqayay erayo kadhan ah kooxda TPLF, waxaana kamid ahaa TPLF hadhacdo iyo maamulka madhalayska ah ee TPLF waan ku habsaanay.
Sidoo kale dibad baxayaasha qoomiyada Tigreega oo marba marka kadambaysa siibadanayay ayaa bilaabay dhagaxtuur iyo in ay handadaan saraakiil kooxda TPLF katirsan oo garoonka kusugnayd, waxayna saraakiishu goobta kaga baxsadeen si dag dag ah.
Kooxda TPLF iyo maamulka Gobolka Tigreega ayaa arintan ladhako faaray waxayna maalin nimadii shalay waayeen taageerayaashii kali ahaa ee wadanka Itoobiya ay kulahaayeen, kooxda ayaa laga nacay dhamaan Gobolada kale ee wadanka wuxuuna Gobolka Tigreegu ahaa meesha kaliya ee taageero ay kuhaysteen.
Sikastaba ha ahaatee qoomiyada Tigreegaya ayaa hada garowsatay in ay kusii socdaan wado mugdi ah kadib markii laga horkeenay dhamaan qoomiyadihii kale waxayna hada diyaar uyihiin in ay dhankooda katuuraan taliska wareersan ee wayaanaha.